admin | Rochak Khabar
Total News 223 Total Lists 358 Total Polls 1 Total Videos 97 joined at 1 month ago
22 Jan, 04:24 AM
महिलाका हरु का यी ७ कुरामा आकर्षित हुन्छन् पुरुष
कुनै पनि महिलामा पुरुषले सुन्दरता बाहेक धेरै कुरा खोज्छन् । त्यस मध्ये पहिलो कुरा हो आत्मविश्वास । पुरुषलाई महिलामा कति आत्मविश्वास छ र कति सम्हाल्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा खुव विचार गर्छन् । 0
21 Jan, 03:52 AM
श्रीमानकाअगाडि हरेक श्रीमती ले गर्न नहुने २० कुरा जानी राखौ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । विश्वका अधिकांश देशमा पुरुष मानसिकता नै हाबी देखिन्छ । दम्पत्ती बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदा दुवैले धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । 2
21 Jan, 03:50 AM
अनुहारबाट यसरी थाहा पाउनुहोस् आफ्नो रोग, यी संकेतलाई बेवास्ता गर्नु हुदैन रोगको कुनै न कुनै संकेत अवश्य हुन्छन् । निकै ध्यान दिएर हेर्ने हो वा याद गर्ने हो भने शरिरमा कस्तो रोग लागेको छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ मात्र कस्तो रोग लाग्दा कस्तो संकेत हुन्छन् भन्ने बारे सचेत हुन आवश्यक छ । आज हामी तपाईं यसबारे ८ जानकारी दिँदै छौं ।
21 Jan, 03:38 AM
केटाले बिहे अघी केटीकाे बिषयमा बुझ्नै पर्ने यि ७ कुरा : नत्र जिवन बर्वाद हुन सक्छ स्त्रीहरुलाई विदेशी भूमी अर्थात बुझ्न कठिन पनि भन्ने गरिन्छ । यदि तपाइँको विवाह हुँदैछ वा हुने वाला छ भने केटीको विषयमा केही जानकारी राख्दा राम्रो हुन्छ । यस्ता जानकारी भएनन् भने सम्बन्धमा अफ्ठेरो समेत पर्न सक्छ । हरेक केटीले गर्ने ७ गल्तीको विषयमा यहाँ च...
21 Jan, 03:32 AM
यी खानेकुरा खाली पेट बिर्सेर पनि नखानुहोस् , निम्तिन सक्छ गम्भीर समस्या
खाली पेट हुँदा पेटमा एसिडको मात्रा बढ्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एसिड बढाउने खानेकुरा खाँदा पाचनक्रिया सम्बन्धी समस्या हुन्छ जस्तै ग्याँस वा कब्जियतको सम्भावना बढ्ने गर्दछ । यस्तै १० खानेकुरा छन् जुन खाली पेट खाँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्ने गर्दछ ।
20 Jan, 11:51 AM
जानौँ के–के हुन् ति चिज ?
20 Jan, 04:15 AM
भुलेर पनि खानुहुदैन यो अवस्था भएका व्यक्तिले माछा ! माछाको मासु खान मनपराउने अधिकांशले यहि सोँच्छन् कि यो अति स्वस्थवर्द्धक खानेकुरा हो। हुन त, माछाको मासुमा ओमेगा-३ फ्याटी एसिड पाइन्छ, जुन मुटु र मस्तिष्कको स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुने खोजबाट पत्ता लागिसकेको छ। त्यसका साथै माछामा प्रशस्तै पाइने प्रोटिन...
उपहारको रुपमा कहिल्यै नलिनुहोस् यी ८ वस्तु
जो कोही पनि उपहार पाएमा खुशी हुन्छौ । तर, के कहिल्यै सोच्नु भएको छ, उपहार दिनेवालाको नियत कस्तो छ भन्ने ? किनकी उपहार दिनेको नियतमा खराबी छ भने तपाईको खुशीमा ग्रहण लाग्न सक्छ ।
20 Jan, 03:52 AM
यो दिशामा मनी प्लान्ट राखे धन लाभ : यस्तो भए अशुभ
मनी प्लान्ट भन्ने बिरूवाकाे नाम त हामि सबैले सुनेकाे र जानेकै छाै । तर यसकाे महत्वबारे धेरैलार्इ जानकारी नहुन सक्छ । अाज हामि याे बिरूवाकाे बिषयमा केही जानकारी मुलक शन्देश दिइरहेका छाै । प्रत्यके बिरुवाले हाम्रो जीवनमा आफ्नै महत्व राख्छ, जस्तै घर भित्र र...
20 Jan, 03:45 AM
भनिन्छ दिनको शुरुवात राम्रो भो भने दिन नै राम्रो हुन्छ । शास्त्रमा यस्ता कुरा उल्लेख छन् जुन कुरा विहान उठ्ने वित्तिकै देखियो भने शुभ र अशुभ हुन्छ ।
18 Jan, 03:26 AM
हामी सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने गर्छौं तर समय नमिल्दा म हस्तमैथुन ... म २२ वर्षीय अविवाहित युवा हुँ । मेरो केटी साथी पनि छ । हामी सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने गर्छौं । यौनसम्पर्कका लागि समय नमिल्दा म हस्तमैथुन गर्छु ।
कहिलेकाहीँ हामी एकआपसमा मिलेर हस्तमैथुन पनि गर्ने गर्छौं । हस्तमैथुन गर्दा केही खराबी पो हुन्छ कि ? यौनसम्पर्क...
15 Jan, 01:17 PM
के तपाईलाई छिटो–छिटो पिसाब लाग्छ ? यस्ता छन् १० कारण हुन सक्छन धेरै जसोलाई छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने गर्छ, जसको कारण उनिहरुलाई थाहा हुँदैन । साधारणतया बढी पानी, चिया–कफि पिउनाले धेरै पिसाब लाग्ने हुन्छ, तर केही व्यक्तिहरुमा यो एउटा गम्भिर समस्या हुनसक्छ ।
15 Jan, 12:52 PM
आमा बन्नु धेरैका लागि खुसीको कुरो हो । त्यसैले महिलाहरु आफू गर्भवती भए नभएको थाहा पाउन जिज्ञासु हुन्छन् । आजभोली त बजारमा धेरै उपकरण आएका छन् जसको माध्यामबाट गर्भ बसेको छ या छैन सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ ।
15 Jan, 12:39 PM
बेसारः घरको डाक्टर
हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने मसला हो, बेसार । तरकारीको निम्ति यसले रंगको काम मात्र गर्दैन स्वादको पनि काम गर्छ । स्वादको मात्र होइन, औषधिको पनि काम गर्छ ।
14 Jan, 04:08 AM